Zimbabwe: Zim to Embark On New HIV Study - allAfrica.com
Zimbabwe will next week embark on a new HIV study to help measure the country's progress toward UNAIDS' 90-90-90 goals and guide policy and funding priorities.
It is supported by the US President's Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR) through the Centre for Disease Control and Prevention (CDC).
A similar study, the first of its kind in Africa was carried out in 2015 and showed that Zimbabwe's HIV prevalence had dropped to 14,6 percent.
Speaking during a ZIMPHIA 2020 Matabeleland North sensitisation meeting yesterday, acting NAC chief executive Mr Amon Mpofu said ZIMPHIA's goal is to examine the distribution of the HIV epidemic and assess the coverage of HIV services at population level.
"The new ZIMPHIA 2020 data will help Zimbabwe document its achievements in the HIV response and help inform improvements. The survey will also help measure Zimbabwe's progress toward UNAIDS 90-90-90 goals and guide policy and HIV funding priorities," said Mr Mpofu.
"We therefore need everyone to play a part in promoting this survey and we rely on our leaders to ensure people are well informed as we would need their cooperation during data gathering," said Mr Mpofu.
"We need to keep our heads high and do everything in our power to reduce new infections in our districts.
"Our prevalence remains high as a province and we need to take HIV seriously even though we have achieved a milestone in reducing deaths," said Dr Chimberengwa.